စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်‌ မုံရွာမြို့နယ်အတွင်း ရေဝင်ကျေးရွာများသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခြင်း
Sagaing Region Government/ Monywa / August 04, 2020
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်‌သည် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းတင်စိုး၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်မောင်ဆွေ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ကြည်၊ တိုင်းဒေသကြီး အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မုံရွာခရိုင်/မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ဥက္ကဌများ နှင့်တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါ၍ (၄.၈.၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက် (၈)နာရီတွင် မုံရွာ မြို့နယ်အတွင်း ရေဝင်ကျေးရွာများသို့ သွာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့သည် ဆည်ကြီးတောကျေးရွာတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေဝင်ရောက်သည့် အိမ်ထောင်စု (၃၀)အတွက် ဆန်ဖိုးငွေကျပ် (၃၀၀၃၀ဝိ)၊ နှာခေါင်းစည်း (၁၄၃) ခု၊ဆပ်ပြာ (၃၀) တောင့် ကိုလည်းကောင်း၊ မြေနဲကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု (၁၉၉)စုအတွက် ဆန်ဖိုးငွေကျပ် (၂၄၉၉၀ဝိ)၊ နှာခေါင်းစည်း (၁၁၉)ခု၊ ဆပ်ပြာ (၂၆) တောင့်တို့ကို ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ရေလျှံဝင်ရောက်သည့် ကမ်းနီမချောင်းအား ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရေးနှင့် ရေလမ်းကြောင်းပြန်လည်တူးဖော်ရေးတို့အတွက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများအား လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်ပြီး အောင်သာကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၈၇)စုအတွက် ဆန်ဖိုးငွေကျပ် (၁၉၆၃၅၀ဝိ)၊ နှာခေါင်းစည်း (၉၃၅) ခု၊ ဆပ်ပြာ (၁၈၇) တောင့်နှင့် ဒဏ်ရာရသူ(၁)ဦးအတွက် ငွေကျပ် (၅၀၀၀ဝိ) ကိုလည်းကောင်း ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဗောဓိတထောင်-ကျောက္ကာလမ်းဘေးရှိ ကမ်းနီမချောင်း ကျောက်စီ မြေထိန်းနံရံ (၂၀၀)ပေ တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေတို့အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ​​​​​​​
Vol. VII, No. 149, Saturday, 12 September 2020
Vol. VII, No. 143, Sunday,6September 2020